DemoChimp: Shandura MaDemo Ako | Martech Zone
DemoChimp parizvino iri mubeta yakavharwa asi ichitsvaga masangano anofarira kushandisa sevhisi. DemoChimp inoenderana neyako chigadzirwa mademo, ichiwedzera yako webhusaiti kutendeuka chiyero uye yako demo-yeku-kuvhara chiyero panguva yekutengesa maitiro, zvese uchiunganidza chigadzirwa analytics. DemoChimp inogadzirisa otomatiki demo mukupindura kune yega tarisiro yakasarudzika inoda, kungofanana nehunyanzvi mutengesi.
DemoChimp Zvimiro uye Bhenefiti:
Chinja Vazhinji Vashanyi Kuti Vatungamirire - Vako vashanyi vewebhusaiti vanozosaina kazhinji pavanosangana nehukama hwehukama. Kana mutungamiri wako apinda, unogona kuona kuti ndezvipi zvikamu zvechigadzirwa chako zvaikosha kwavari uye kuti ndezvipi zvikamu zvaisave kuitira kuti ugone kuteedzera chako
Akangwara Demo Injini - Iwe unombonzwa here chikumbiro, "Unogona kunditumira ini demo?" Iye zvino unogona, uye DemoChimp inogadziriswa inogadzirisa demo sezvo ichipindura zvido zvetarisiro, uchizviita kunge mutengesi mupenyu. Iwe unogona zvakare kuona kuti ndiani wavakagovana naye demo musangano ravo kuitira kuti iwe ugone kuwana nekubata iro rese rekutenga pani.
Tsvaga Demo Analytics (Demolytics ™) - Pamberi pezviitiko, DemoChimp inounganidza data rakakosha zvichienderana nemhinduro dzevatarisiri nezviito panguva yedemo. Tinodaidza kuti maDemolytics ™. Wana izvi analytics kuburikidza nedhibhodhi kana kudhirowa pasi kune yakasarudzika tarisiro.
Tags: demo appdemo chikuvademochimpDemoschigadzirwa chiratidzo chikuvachigadzirwa mademodemo rekutengesaratidziro yekutengesa
Gumiguru 15, 2013 na8: 24 PM
Ndatenda neizvi. Ini ndiri weboka rekutanga uye kubatana neanogona tekinoroji yekutanga mupi kunogona kubatsira munzira mbiri.